सञ्जयकी पत्नी डिभोर्सपछि बनेकी थिइन् कंगाल
बलिउड नायक संजय दत्तको जीवनमा आधारित बायो पिक चलचित्र “संजु”को ट्रेलर बाट कैयौले उनको जीवनको पाटो थाहा पाईसकेका छन् । उनको जीवनमा कयौँ युवतीहरु आउने जाने गरे। जसमध्ये एक रिया पिल्लई पनि थिइन्, जसले संजय दत्तसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन्। उनको जीवनमा माधुरी दीक्षित आइन् र गइन् पनि । त्यसपछि
बलिउड नायक रणबीर कपुर आजकाल संजय दत्तको बायोपिक फिल्म ‘संजु’ का कारण चर्चामा छन् । हालै रिलिज भएको फिल्मको ट्रेलरमा रणबीरको कामको निकै तारिफ आइरहेको छ ।संजुको ट्रेलर रिलिज भएको २४ घण्टा नबित्दै १ करोडभन्दा बढीले हेरिरहेका छन् । संजूका साथै रणबीर आजकाल रणबीर कपुरसँगको सम्बन्धका कारण पनि निकै चर्चा
बिर अस्पतालको सरसफाईको नाममा लुटको खेती गरेको मच्चाएको गम्भीर आरोपl नियतमै खोट की फसाइयो ? यस्तो रहेछ वास्तविकता रिपोर्ट हेर्नुहोस
नेपाल सरकारले शुरुवात गरेको वीर अस्पताल सरसफाइ कार्यक्रमका नाममा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । फाउन्डेसनको नाममा लाखौं रकम असुल गरेको आरोप समेत लागेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापीएपछी सामाजिक संजालमा दुई थरिका प्रतिकिया आहीरहेको छ कसैले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले इमोनलसनल तरिकाबाट समाजसेवाको नाममा ब्यापार
अन्जु पन्तको सुख, दुख अनि संघषको जीवन कथा भिडियोमा हेर्नुहोस
अञ्जु पन्त नेपाली गायिका हुन् । नेपाली गायन क्षेत्रमा उनले विभिन्न चर्चित गीतहरू गाएकी छिन् जसमध्ये न बिर्सें तिमीलाई…, म तिमी बिना मरीहाल्छु, भुन भुन बोल्यो भमरा आदि रहेका छन् । उनले हालसम्म १८ वटा नेपाली चलचित्रका लागि गीत गाईसकेकी छिन् भने सयौं सांगीतिक एल्बममा आफ्नो आवाजको जादु छरिसकेकी छिन्
सलमान खानले गरे हिन्दूधर्मको भावनामा अघात ! उनलाई पिट्नेलाई २ लाख दिने घोषणा
बलिउड कलाकारहरु विभिन्न विषयले विवादमा आइरहेका हुन्छन् । हालै अभिनेता गोविन्दाले एक मन्दिरमा भैंसी काटेको समाचार आइरहेका बेला अर्का बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले हिन्दूधर्मको भावनामा चोट पुर्याएको आरोप लागेको छ । हिन्दूधर्मको भावना अघात गरेको भन्दै सलमानलाई पिट्नेलाई दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने एक हिन्दू संगठनका नेताले घोषणा गरेका बीबीसीले
बिहेपछि सोनम कपुरको पहिलो काम नै असफल, परिन् सोनम अप्ठ्यारोमा
करिना कपुर खान, सोनम कपुर, शिखा ताल्सानिया र स्वरा भास्कर अभिनित फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’ प्रदर्शनमा आउनुअघि नै विवादमा परेको थियो । आजबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मलाई पाकिस्तानमा रोक लगाइएको छ । प्रदर्शनअगावै रोक लगाइएपछि वीरे दी वेडिङ थप चर्चामा आएको छ । भारतीय मिडियाले भने फिल्मको व्यापारमा यसले असर पार्ने उल्लेख गरेका छन् ।